Articles tagged 'lindiwe zulu'
SA unmoved by 'contrived' diplomatic row 23 July 2013 HARARE - South Africa remains unmoved by Zanu PF's constant goading of President Jacob Zuma in their futile bid to stump his impartial mediation in Zimbabwe's perennial political crisis. A highly-placed source in Pretoria said yesterday that Zuma and the South African government were “well awa...
Sadc, Zuma mantain pressure on Zim 22 July 2013 PRETORIA - Sadc is keeping pressure on Zimbabwe to hold free and fair elections next week despite attempts by President Robert Mugabe and his Zanu PF party to divert the region's attention from important issues around the polls. The region's organ for politics, defence and security said yester...
Mugabe attacks Zuma 21 July 2013 HARARE - President Robert Mugabe yesterday said African countries should not spread lies about Zimbabwe, in a thinly veiled attack aimed at South African President Jacob Zuma. The South African president recently criticised Zimbabwe's preparations for elections, saying the process was “not loo...
July 31 polls in disarray: Zuma 19 July 2013 HARARE - A top South African diplomat said yesterday that preparations for an election in Zimbabwe at the end of the month were "not looking good", unusually strong criticism of President Robert Mugabe from his powerful neighbour. Lindiwe Zulu, President Jacob Zuma's special adviser on Zimbabwe, s..
Has Mugabe lost his marbles? 9 July 2013 HARARE Given the recent and blistering attack on Lindiwe Zulu by President Robert Mugabe and at a time Zimbabwe has been desperate for friends, if not made steady progress in its re-engagement efforts one cannot escape the temptation that: The gods first make mad those that they wish to destroy. ...
EDITORIAL COMMENT: Address issues Mr President 9 July 2013 HARARE Election campaigns often bring the worst in politicians as depicted by President Robert Mugabe s out-of- sorts utterances denigrating South African diplomat Lindiwe Zulu by labelling her a street woman . Such a coarse description of women goes against the grain of modern trends that emphas...
'Deliver us from evil' 9 July 2013 PRESIDENT Robert Mugabe would have been reminded he has presided over a seriously hungry nation. As he bad-mouthed a South African official and Sadc at the weekend, some in his audience were more concerned about something to put into their own mouths: bread. Mugabe attacked Lindiwe Zulu, Ja...
South Africans hit back at Mugabe insults 6 July 2013 HARARE – South Africans reacted sharply to comments made by President Robert Mugabe during the launch of Zanu PF's election manifesto at Zimbabwe Grounds Friday. The country's octogenarian leader not only inexplicably threatened to pull Zimbabwe out of Sadc at the rally, he also tore into Sout...
I'll pull out — Mugabe 6 July 2013 HARARE - President Robert Mugabe has threatened to pull Zimbabwe out of regional grouping Sadc accusing it of being influenced by some stupid and idiotic woman Lindiwe Zulu. He used his Zanu PF election manifesto launch in Harare s high density suburb of Highfield to attack South African Presiden...
Zuma advisor stupid, idiotic: Mugabe 5 July 2013 HARARE - President Robert Mugabe has come out guns blazing threatening to pull out of Sadc which he says is being influenced by some stupid and idiotic woman Lindiwe Zulu. Mugabe has told a gathering of his supporters at Zimbabwe Grounds during the launch of the Zanu PF election manifesto that Zu...